Robock Q7 MAX+: Awood badan, dhaqso badan oo is-maruurin | IPhone News
louis padilla | 02/05/2022 10:00 | Qalabka IPhone, dhowr
Waxaan ku falanqeyneynaa mid ka mid ah qalabka nadiifiyaha robot-ka ee ugu badan ee suuqa ku jira sifooyin horumarsan sida socodka LiDAR iyo is-madhan, madax-bannaani heersare ah oo awood u leh inuu nadiifiyo oo xoqo gurigaaga oo dhan wakhtiga rikoorka ah.
Noocyo kala duwan oo ku jira qaybta nadiifiyaha vacuum-ka ee robot-ka waa mid aad u weyn. Waxaa jira robots badan oo ku shaqeeya moobilada, vacuum iyo mop, laakiin marka aan ku darno sifooyinka liisku wuu sii yaraanayaa, gaar ahaan haddii aynaan doonayn in aan kharash badan ku bixinno. Maanta waxaan falanqeyneynaa tartan culus oo loogu talagalay boqorka bartamaha dhexe, kaas oo lagu garto waxqabad wanaagsan oo qiimo fiican leh. Kan cusub Roborock Q7 Max + wuxuu ku yimid tallaabo aad u xoog badan, oo leh hawlo badan oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya laakiin leh qiime aad u xiiso badane, oo leh saldhig is-maruuris ah kaas oo ah cidhifyada keega.
Awood nuugista 4200Pa
5200 Mah batari
Madax-bannaanida 3 saacadood (300m2)
Isku xirnaanta WiFi
Navigation LiDAR oo leh khariidad 3D
Awoodda haanta biyaha 350ml (oo loogu talagalay 240m2 xaaqid) C
Awoodda weelka boodhka 470ml
Awoodda taangiga is- faaruqiso 2,5 litir
Xakamaynta codka iyada oo loo marayo Alexa iyo Siri (iyada oo loo marayo gaagaaban)
Buraashka ayaa ka duwan moodooyinka caadiga ah, halkan waxaan ku heli doonaa mid ka samaysan gebi ahaanba caag, oo aan lahayn bristles, taas oo sida waafaqsan calaamadda. ku fiican in laga fogaado dhibaatooyinka timaha u janjeera inay "burburiyaan" burush dhaqameed, runtuna waxay tahay in markii hore aan xoogaa shakisanaa, ma jirin wax kale oo aan ka ahayn in aan la raaco soo saaraha. Buraashka ugu weyn waa in aan ku darnaa hal buraash oo wareeg ah oo ka caawiya ururinta wasakhda dambe. Buraashyadan, oo ay la socdaan awoodda nuugista ee la hagaajin karo iyadoo loo eegayo nooca dabaqa, waxay ka dhigaan faakuum aad loogu qanco.
Biyaha iyo haanta wasakhdu waa qayb ka mid ah haan keli ah. Sida iska cad waxay ka kooban tahay laba qaybood, laakiin habkan waxaa suurtagal ah in la badbaadiyo meel bannaan. Labada taangiyada waxay leeyihiin awood ka badan oo ku filan oo ay ku nadiifiyaan celceliska guriga, xitaa weyn, si aysan u jirin wax khalad ah go'aanka Roborock ee arrintan la xiriira. Taangigan wadajirka ah ayaa aad u fudud in meesha laga saaro oo la beddelo.
Hawlgalka robot vacuum cleaner-mop waxa jira qaybo kala duwan oo wax lagaga qabanayo. Fakiyuumku waa lama huraan, si la mid ah shaqada xaaqida, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo laga yaabo inaysan si cad u muuqan laakiin si buuxda u kharribi kara waayo-aragnimada isticmaalka robot kasta. Nidaamka navigation waa mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee nadiifiyaha vacuum nadiifiyaha. Ma jiro wax ka niyad jabsan robotka oo aan dhamaystirin nadiifinta sababtoo ah way luntay, xayirantay ama sababtoo ah waa inay ku noqotaa salkeeda mana heli karto. Nasiib darrose waa wax aad ugu badan robots badan, laakiin nasiib wanaag waa wax aan ku dhicin Roborock.
El Nidaamka navigation ee LiDAR oo ay weheliyaan 4 dareemayaal in Roborock Q7 Max+ uu ka dhigay inuu ku wareego guriga iyada oo aan dhib yar lahayn.. In la arko isaga oo ku wareegaya kuraasta, albaabbada u soo maro, caqabadaha iska ilaalinaya... waa farxad. Iska ilow wax ku saabsan robots-yada wax walba ku dhacaya, tani waa shay kale oo dhan, haddii ay tahay inaad adigu wadato, hubaal ma aad fiicnaan doontid!
Codsiga waxaad ku arki kartaa dhammaan dariiqa robot-ka ee gurigaaga, iyo qaabka nadiifinta ee soo socota ayaa si fiican loo kala saari karaa: marka hore cidhifyada qolka, ka dibna gudaha, sawirida xariijimo barbar socda ilaa uu daboolo dhammaan dusha sare. Sidan, waxaa suurtogal ah in lagu nadiifiyo wakhtiga rikoodhada (wax ka yar 90 daqiiqo guri ku saabsan 140m2). Ma jiro robot kale oo u soo dhowaanaya wakhtigan, qayb ahaan sababtoo ah dhamaantood waxay ku qasbanaadeen inay si buuxda u buuxiyaan nadiifinta., wax aan Roborock u baahnayn gabi ahaanba. Waxay ka baxdaa salkeeda oo 90 daqiiqo ka dib waxay ku soo noqotaa salkeeda iyada oo in ka badan kala badh batteriga weli la heli karo. Farxad dhab ah.
Iyo dhamaadka nadiifinta waxay timaaddaa mid ka mid ah qaybaha ugu fiican: is- faaruqinta. Taangiyada Robotku waa yar yihiin, oo ku filan hal nadiifin, ku filan ilbiriqsi, kuma filna saddex meelood meel. Taas macnaheedu waxa weeye in mar kasta oo aad nadiifinayso waa in aad faarujisaa haanta ama ma awoodid inaad dhamaystirto midda xigta. Hagaag, uma baahnid inaad halkan wax ku samayso, sababtoo ah Marka la dhammeeyo oo la yimaado saldhigeeda waxay u diri doontaa dhammaan wixii ku jira taangiga robot-ka taangiga weyn ee is- faaruqiso., oo leh awoodda 2,5 litir, ilaa toddobaad (ama ka badan) iyada oo aan wax faaruqin.
Xagga xoqitaanka, natiijadu waa wanaagsan tahay, laakiin ha filan in ay ka saarayso wasakhda ku duugan sida aad kartoo adigoo isticmaalaya dhowr baas oo "tuujin". Waxay ku fiican tahay nadiifinta dayactirka maalinlaha ah., waxay ka tagtaa ciidda qoyan, laakiin si dhakhso ah ayey u engegtaa, iyo wax kasta oo ka sarreeya ma "wasakh" sida kuwa kale. Ma aha shaqadiisa xiddiga, laakiin si fiican ayuu isu difaacaa.
Dhammaan xakamaynta robot-ka waxaa lagu sameeyaa codsigeeda, taas oo ah heerka sifooyinka Roborock Q7 Max +. Laga soo bilaabo habka qaabaynta ilaa maamulkeeda iyo muuqaalka wakhtiga dhabta ah ee nadiifinta, waxay yihiin heerka ugu sarreeya. Waxaa jira xulashooyin badan waxaana lagu hirgaliyay arjiga dhexdiisa si dareen leh oo sahlan in la isticmaalo.
Siyaabo kala duwan oo loo eego khariidadda nadiifinta, suurtogalnimada in lagu nadiifiyo aagagga, qolalka ama guriga oo dhan, xulashada awoodaha faakuumaynta iyo xoqidda kala duwan, qeexida noocyada dabaqa, dhejinta alaabta guriga ... waa codsiga ugu dhammaystiran ee aan isku dayay marar badan.ka fogaanta kuwa kale. Barnaamijyada dhammaan noocyada kala duwan, suurtogalnimada in la xafido maabyo kala duwan, xitaa qeexida dabaqyo kala duwan oo isku mid ah, dhib kuma yeelan doontid la qabsiga hawlgalka robotka gurigaaga, nooc kasta oo uu yahay.
Codsiga waxaad xitaa habeyn kartaa kontoroolka codka, oo ku habboon Alexa iyo in kasta oo aysan ku habboonayn HomeKit (maxay Apple sugaysaa inay ku darto qaybtan aaladaha nidaamka otomatiga guriga?) Waxaan isticmaali karnaa IOS Shortcuts si aad u buuxiso farqigaas, marka iPhone, Apple Watch ama HomePod waxaad ku bilaabi kartaa nadiifinta codkaaga. Dabcan waxaad heli doontaa ogeysiisyo dhacdo kasta (bilawga nadiifinta, dhamaadka iyo "shilalka" ee dhici kara). Oo waxaad hubin kartaa xaaladda qalabka u baahan nadiifinta ama isbeddelka.
Roborock Q7 Max+ waa mashiinka nadiifiyaha nadiifiyaha ah ee ugu fiican ee aan ku tijaabiyay nidaamkeeda marin-haweedka, madax-bannaanida iyo natiijada nadiifinta ee ay bixiso. Waxa kale oo ay leedahay nidaamka is- faaruqinta kaas oo siinaya raaxo aan caadi ahayn isticmaalaha. Waxayna waxaas oo dhan u samaysaa qiimo caadi ah oo ka mid ah kuwa dhexe, laakiin leh astaamo sare oo keliya qaar ka mid ah kuwa sare. Qaabkan oo leh nidaamka is- faaruqinta ayaa lagu iibiyaa Amazon (isku xirka) ( Thanks to €150 coupon dhimis
Ku dhejiyay: May 2 ee 2022
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 2 ee 2022
Codsi aad u wanaagsan oo loo qaabeeyey oo leh doorashooyin badan
Nidaamka xoqidda xaddidan
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Roborock Q7 MAX+: Awood leh, degdeg badan oo is-maruqinaya
Waxay jabsadeen ku dhawaad ​​3GB oo xog ah iPhone-ka madaxweynaha Spain
Apple Watch la'aanteed heerkulka?